Iphaneli yokufaka isilingi, iPhaneli yoDonga, iiBhodi zeMagnesium oxide-CESE2
Intambo ye-3 engundoqo ye-4 engundoqo ye-XLPE
Igama I-XLPE i-Power Cable Standard i-IEC60502, i-BS, i-DIN, i-ASTM, i-GB12706-2008 yeVoltage esemgangathweni ukuya kuthi ga kwi-35KV yeCopper Copper okanye iAluminium yeConductor Cross Icandelo Ngokusekwe kwiimfuno zabathengi. Ilinganisiwe i-voltage 35kV nangaphantsi kwe-35kV umgca wokuhambisa Iphakheji yeplanga yeDrum yeplanga okanye i-Iron-ngomthi igubhu le-PVC okanye i-XLPE XLPE intambo yamandla egqunyiweyo ilungele ukubeka ...
Iphaneli yesanti yesanti e-rock kunye ne-double layer magn ...
Igama lemveliso Iphaneli yesandwich yerock Rock Ububanzi 900mm 980mm 1160mm 1180mm Max Length 6000mm or customized Wall Wall 50mm 75mm 100mm Steel Facer Thickness 0.5-1.0mm Outer Plate Material PPGI, Al-mg-M, n Alloy steel, SS steel, Ti-Zn steel , HPL, VCM Ukwaleka i-PE, i-PVDF, i-HDP yezinto ezibonakalayo ze-EPS Isakhelo seSakhelo okanye ifreyimu yesakhiwo seSicelo seKhemikhali, unyango, umbane, ukutya, igumbi lokucoceka kwamayeza Lithatha iphepha lomgangatho wePCGI kunye nefayile ye-EPS. Hayi ...
Iklasi 1 yokonga amandla udidi ngqo umgca cl cl ...
Igama leMveliso Umda wohlobo oluchanekileyo lwepaneli yokukhanya kwepaneli ecocekileyo Amandla oMbane we-14W 28W 18W 36W Imvelaphi ye-China Voltage AC200V inqanaba lokufakwa kwinqanaba leSatifikethi se-1 CE CCC RoHS Ukukhanya okuqaqambileyo kuphuma kucaba ngokupheleleyo, kunye ne-Angle ye-luminance ebanzi. Uyilo lwesekethe olukhethekileyo, ukunqanda isibane esinye esibi sichaphazela umphumo, ngaphandle kokuphazanyiswa ngonomathotholo, ngekhe kungcolise okusingqongileyo. Ugcino lwamandla, ukukhanya okuphezulu, akukho mercury, akukho infrared, akukho ULTRAVIOLET, akukho siphazamiso sombane, akukho ...
Iklasi 1 iklasi 0 yerabha yokugquma mater ...
Ukusebenza kukhuseleko lomlilo oluphezulu Ukusebenza okungacimi mlilo werabha kunye neemveliso zeplastiki zeCandelo B1 kuyahlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zeklasi B1 enokutsha nangaphezulu kuchazwe kwi-GB 8627 "Indlela yoHlelo lokuSebenza koMlilo weZinto zokwakha". Sebenzisa ifomula yokhuselo lokusingqongileyo eyahlukileyo, loo nto ikwimeko yokutsha, uxinzelelo lomsi lincinci, xa ukutsha kungazukuvelisa ingozi kumsi womntu. I-nano micro foa yokuthengisa ...
Izinto zokuqala zesayensi (Thailand) Co., Ltd.
I-MLT SOLAR ENERGY (eThailand)
I-CESE2 (Thailand) Co. Ltd, esekwe ngo-2016, ibekwe eBangkok, ikomkhulu laseThailand. Iphantsi kwenkqubo ye-China ye-Elektroniki yezoBunjineli i-No.2 Construction Co. eqhotyoshelwe kwi-CEC.
Sijolise kubathengi kwaye siphatha itekhnoloji yenkqubo yobunjineli ekhokelayo yasekhaya njengokhuphiswano lwethu oluphambili. Sibonelela ngeenkonzo zobuchwephesha ekwakhiweni kobuchwephesha obuphezulu kumacandelo eesemiconductors, imiboniso yeplanethi, ukutya kunye namayeza, isayensi yobomi, amaziko ophando lwezenzululwazi, amandla amatsha, ukhuselo lwendalo esingqongileyo, ishishini smart, njl. omnye-stop zonke-ngeenxa zonke izisombululo zobunjineli zenkqubo yemveliso eliphezulu-zobugcisa.